Amaah lagu xaqiijinayo guryaha: waa maxay | TeraNews.net
Amaah lagu xaqiijinayo guryaha: waa maxay
qoraaga Tera news La daabacay 03.09.2019
Amaah ay ku xaqiijiso milkiilaha guryaha waa helitaanka amaah amaah ah oo laga keenay shaqsi ama hay'ad sharci. Shayga loo ballanqaaday waa hanti ma guurtada ah oo leh qiimo cayiman suuqa. Deynta noocan oo kale ah badanaa waxay ku wareersan tahay amaahda guryaha, taas oo aasaasi ahaan khalad u ah. Ka dib oo dhan, mawduuca ballan-qaadku ma aha mawduuca iibsigu.
Shirkad kasta oo siisa amaah amaah ay ku xaqiijiso milkiilaha guryaha waxay leedahay qawaaniin u gaar ah. Tusaale ahaan, bangiyada badankood waxay u baahan yihiin caddeyn dakhliga. MFI MiG Credit Astana waxay ku bixisaa maal kasta ujeeddo kasta iyada oo loo eegayo nidaam la fududeeyey, iyada oo aan la haysan waraaqo. Amaanada ku aaddan amniga hantida maguurtada ah ee Almaty - Xal fiican oo loogu talagalay horumarinta ganacsigaaga.
Amaah lagu aaminay hantida maguurtada ah: faa iidooyinka
Waxqabadka. Dhibaatada ka jirta bangiyada oo dhan, iyada oo aan laga reebin, waa oggolaanshaha muddada dheer ee deynta lagu xaqiijiyey dhismaha guryaha. Qiimaynta guryaha, raadinta macmiilka xog-ururinta ururada kale, oggolaanshaha qaddarka xafiiska madaxa, saxiixa heshiisyo dhinacyo badan leh, caymis. Shirkadda MiG Credit Astana waa ogtahay qiimaha waqtiga.
Si aad u hesho deyn waxaad u baahan tahay xirmooyin dokumenti oo ugu yar:
Shakhsiyaadka - kuwani waa dukumiintiyo aqoonsi ah oo xaqiijinaya xuquuqda ballanqaadka, iyo sidoo kale shahaadada cinwaanka iyo shahaadada diiwaangelinta guryaha la kireysto;
Hay'adaha sharciga ah - kani waa nuqul ka mid ah dukumentiyada xubnaha iyo xuquuqda hantida, iyo sidoo kale rukhsadda guddiga maamulka ee deyn qaataha iyo shahaadada diiwaangelinta hantida maguurtada ah.
Qiimayn cadaalad ah. Bangiyadu waxay danaynayaan inay hoos u dhigaan qiimaha hantida maguurtada ah ee loo wareejiyay si kayd ah. Runtii, haddii ay jiraan wax dhibaato ah, baanka wali wuu sii jiri doonaa. MiG Credit Astana kuma lug laha khayaamada noocaas ah - qiimaha waxaa lagu qiyaasaa sicirka suuqa. Intaa waxaa u dheer, shirkaddu waxay leedahay adeeg - booqasho takhasus leh oo bilaash ah oo loogu talagalay qiimeynta horudhaca ah ee dhismaha guryaha ee labada dhinac ah.
Habka shakhsi ahaaneed. Ka sokow hoos u dhigista qiimaha hantida maguuraanta ah ee bangiyada, bangiyada waxay u janjeerayaan nooca walxaha laftooda. Lacagta waxaa si ikhtiyaar ah loo siiyaa oo keliya amniga guryaha dabaqyada ku yaal dabaqyada sare. Bangiyadu waxay isku dayaan inay bixiyaan xaddiga ugu yar ee xarumaha kale. MiG Credit Astana ma xalliso hantida maguurtada ah. Guryo gaar loo leeyahay, dhulal dhul leh, waxyaabo aan deganeyn - Xayiraad loguma haayo deynta. Haddii la doonayo, macmiilku wuxuu heli doonaa amaah dheeraad ah oo ah xaddiga '50-60%' ee qiimaha hanti ma guurtada.
Amaahada oo lagu aaminay hantida maguurtada ah: khasaaraha
Had iyo jeer waxaa jira khatar, gaar ahaan xaaladahaas marka lacag laga qaado horumarka ganacsiga laga bilaabo xoq. Laakiin xitaa xaaladahaas, ururka MiG Credit Astana wuxuu diyaar u yahay tanaasul. Waxaa jira daraasiin qalab ah kuwaas oo ka caawin doona deyn bixiyuhu inuu soo celiyo amaahdii uu ku haystay dhismaha guryaha marka loo eego xaaladaha ku habboon.
Kuwani waa bankiyo danaynaya isku filnaashaha amaahda. MCO MiG Credit Astana waxay u shaqeysaa mustaqbalka. Mar haddii uu amaah ku qaatay shuruudaha wanaagsan, macmiilku xaqiiqdii wuu dalban doonaa mar labaad ama wuxuu shirkadda kula talinayaa saaxiibbadaa iyo kuwa ay yaqaannaan. Tani waa sida ganacsiga loo dhiso adduunka oo dhan.
Dagaalkii ganacsi ee Mareykanku la galay Shiinaha wuxuu gaadhay heer aan laga soo laaban
Canshuurta dijitaalka ah ee danta Apple iyo Google - aragtida
Olympus - dhamaadka xilligii kamaradda dhijitaalka
Sanduuqa TV-ga ZIDOO Z10: xarun warbaahin guri ku taal
2020 sneakers fashion: Adidas Samba wuu soo laabtay
Nimses, Bitcoin, Tesla: Ahraamta dhaqaalaha